दुब्लो, पातलो हुनुहुन्छ ? यी चीज खानुस्, केही दिनमा हुन्छ चमत्कार – Eshankharapur
मुख्य पृष्ठ /Lifestyle/ Health/दुब्लो, पातलो हुनुहुन्छ ? यी चीज खानुस्, केही दिनमा हुन्छ चमत्कार
दुब्लो, पातलो हुनुहुन्छ ? यी चीज खानुस्, केही दिनमा हुन्छ चमत्कार
कोही व्यक्ति जति खानेकुरा खाए पनि फुर्तिलो, बलियो, जाँगरिलो र मोटो हुँदैनन् । जति सुकै प्रोटिनयुक्त वा सन्तुलित खाना खाए पनि एकदम दुब्लो, पातलो र कमजोर हुन्छन् । आफ्नो शरीरलाई लिएर उनीहरु चिन्तित पनि हुन्छन् ।
दुब्लो पातालो भएकै कारण कतिपय मानिसहरु तौल बढाउने अर्थात् मोटाउने औषधी खान्छन् तर यस्ता औषधीहरुले स्वास्थ्यमा गम्भीर हाने पु-याउने गर्छ । चिकित्सकहरु पनि यस्ता औषधिहरु सेवन नगर्न सुझाव दिन्छन् ।
हाम्रो शरीरको वजन बढाउन र पातलो वा दुब्लो शरीरलाई फुर्तिलो बनाउन कार्बोहाइड्रेट र प्रोटिनले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ। प्रोटिन र कार्बोहाइड्रेटले भरिपूर्ण केही चिजहरुको खानाले साता दिनमै तपाईको शरीरको वजन बढ्नेछ।
तपाई शरीरको तौल बढाउँन चाहानुहुन्छ भने घरमा साबुदानाको खीर र आलु खानुहोस । हरेक दिन दुधमा साबुदाना मज्जाले पकाएर खीर बनाएर खाने गर्नुहोस् । यसले शरीरमा उर्जा प्रदान गर्नुका साथै जस्तोसुकै पातलो मान्छे पनि बलियो, मोटो र मजबुत हुन्छ।
त्यस्तै उसिनेको आलु खानुस् यसले पनि तपाईको तौल बढाउन मद्दत पु-याउँछ । आलुमा भरपुर मात्रामा कार्बोहाइड्रेट हुन्छ जसले पातलो वा दुब्लो व्यक्तिलाई फुर्तिलो र स्फुर्त बनाई शरीरको तौल बढाउँछ। यो तरिका तौल बढाउनको शत प्रतिशत प्रभावकारी हुने आयुर्वे्दिक घरेलु उपाय हो।
जाडोमा यी ३ रोग भएका ब्यक्तिले भुलेर पनि नखानुस् काउली !!
फिल्टर राखिएकाे मास्क नलगाउन चे’तावनी
शरिरमा रगतको कमी छ ? आजबाटै खान सुरु गर्नुस् यी ६ खानेकुरा !
बच्चा जन्मेको १ वर्षसम्म बच्चालाई के खुवाउने ,के नखुवाउने ??
यी हुन् शरिरको सुगर लेवल नियन्त्रण गर्न मद्धत पुर्याउने यी घरेलू उपाएहरु – जानी राखौ